यी अक्षरको नाम गरेका महिलाहरु हुन्छन निकै भाग्यमानी ! – उज्यालो खबर
यी अक्षरको नाम गरेका महिलाहरु हुन्छन निकै भाग्यमानी !
बुधबार, आश्विन २१, २०७७ | १५:५०:५० |
संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि महिलालाई देवीको अवतारको रुपमा लिने गरिन्छ। महिलालाई नराम्रो नजरले हेर्यो भने नराम्रो हुने या पा’प लाग्ने धार्मिक मान्यता समेत रहेको छ। त्यसैले महिलालाई मान सम्मानको दृष्टिले समेत हेर्ने चलन रहेको छ। महिलालाई आकर्षणको एक महत्वपुर्ण बिन्दुका रुपमा पनि लिने गरिन्छ।
आज हामी यी चार अक्षरबाट नाम सुरु भएका महिलाहरुको बारेमा कुरा गर्न जादैछौं। नामको सुरुको अक्षर कुनकुन भएका महिलाहरुले परिवार र समाजका हितका लागि काम गर्छन त ?
‘R’ (आर )
नामको अक्षर R (आर ) बाट सुरु हुने महिलाहरु एकदम सुन्दर हुने गर्दछन। खास कुरा त यो हो कि यस नामको महिला जस्तो सुकै समस्याको पनि सामना गर्न सक्ने बिशेष स्वभावका हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने R (आर ) अक्षरबाट नाम सुरु हुने महिलाहरुले सधै आफ्नो पति र परिवारलाई साथ दिने गर्छन।
‘P’ (पी )
P (पी ) अक्षर बाट नाम सुरु भएका महिलाहरु छिट्टै रि’साउने र भा’बुक हुने स्वभावका हुन्छन। यस्ता महिलाहरु आफ्नो कामको एकदम सम्मान गर्ने किसिमका हुन्छन। यिनीहरुको मन निकै चोखो हुन्छ। यी महिलाहरुले आफ्नो घर परिवारको अधिक साथ र सहयोग गर्ने गर्दछन।
जुन महिलाको नामको सुरुको अक्षर “K” बाट सुरु भएको हुन्छ त्यस्ता महिलाहरु अत्यधिक भाग्यशाली हुने गर्दछन। यस्ता महिलाहरु कुनै पनि कुरामा घ’मण्ड नगर्ने स्वभावका हुन्छन। अझ बिशेष रुपमा भन्ने हो भने यी नाम गरेका महिलाहरु अत्यधिक सुन्दर समेत हुन्छन।
‘T’ (टि )
T (टि )अक्षरबाट नाम सुरु भएका महिलाहरुले समाजमा धेरै मान सम्मान प्राप्त गर्ने गर्छन । यस्ता महिलाहरु सबैको खुसि राख्नका लागि निकै प्रयास गर्दछन। यिनीहरु शान्त स्वभावका हुन्छन। मुख्य कुरा यो हो कि यस्ता नाम गरेका महिलाहरुले बिवाह पश्चात पनि आफ्नो पतिको घरमा राज गर्ने सम्भावना हुन्छ।
महिलालाई देवीको अवतारको रुपमा लिने गरिन्छ। महिलालाई नराम्रो नजरले हेर्यो भने नराम्रो हुने या पा’प लाग्ने धार्मिक मान्यता समेत रहेको छ। त्यसैले महिलालाई मान सम्मानको दृष्टिले समेत हेर्ने चलन रहेको छ। महिलालाई आकर्षणको एक महत्वपुर्ण बिन्दुका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। नामको सुरुको अक्षर कुनकुन भएका महिलाहरुले परिवार र समाजका हितका लागि काम गर्छन त ? जुन हामीले माथी जानकारी दिईसकेका छौ ।
विश्व गौडेलको “सुनरिमै” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
भूमिका सुब्बाको ‘वनचरी’ सार्वजनिक (भिडियो)
महिलाहरुले कण्डम कसरी प्रयोग गर्छन खुल्यो यस्तो रोचक तथ्य
श्रीमान विदेश गएपछि बिबाहित महिला गर्भनिरोधी औषधि लिन अस्पताल आउँनुलाई के भन्नुहुन्छ
विश्व गौडेलको सुुनरीमै बजारमा आउँदै
यौन सम्पर्क कसरी गर्ने ? (पुरा पढ्नुहोस)
महिलाहरु पुरुषले आफ्नो यी ३ अंग हेरोस भन्ने चाहन्छन